Fifindràmonina · Janoary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Fifindràmonina · Janoary, 2013
Tantara mikasika ny Fifindràmonina tamin'ny Janoary, 2013
Eoropa Andrefana 08 Janoary 2013
ONG roanjato avy amin'ny faritr'i Eoropa manontolo no nihaona tao amin'ny Parlemanta Eoropeana tao Bruxelles ny 4 Desambra teo. Nandefa antso iray izy ireo hanafoanana ny fampanofàna tena sady nanolotra ireo faritra iasan'ny politika eoropeana iray ho fanafoanana. Ho an'ireo mpangataka fanafoanana, ny fanaovana ny fampanofàna tena ho toy ny heloka bevava no fanalahidy hanoherana ny famarotan'olona ho amin'ny fitrandrahana azy ireny amin'ny resaka filàna ara-nofo. Kanefa manerana an'i Eoropa sy izao tontolo izao, ireo matianina amin'ny resaka filan'ny nofo, frantsay na vahiny, dia maneho ny tsy fankasitrahan-dry zareo ny fametrahana ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ity fampanofàna tena ity ho toy ny olona mpanao heloka bevava,takian-dry zareo ny zo ho afaka mandray fanapahan-kevitra samirery sy ny fanajàna ny zo fototr'izy ireo ary angatahany ny hametrahana sata iray matotra ho an'ny asany.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 07 Janoary 2013